UMkabayi uthi wacishe wasilaxaza Isibaya
UTHEMBI Nyandeni useveze ukuthi kube yiminyaka ebigcwele injabulo kuye ukulingisa emdlalweni Isibaya, yize izinkinga bezikhona kodwa bakwazile ukubhekana nazo kwaze kwaba sekugcineni ISITHOMBE: SIGCINIWE
Nokubongwa Phenyane | February 12, 2021
UMLINGISI weSibaya oyibambe iminyaka eyisishiyagalombili kulo mdlalo, uThembi Nyandeni, uveze ukuthi wacishe washiya kuwo ngenxa yokuthi babefuna ukuthi abe nesoka.
UThembi, ubelingisa indawo kaMkabayi Zungu, okungowesifazane ongusomatekisi futhi ovikela umndeni wakhe, nobezibambela inganono uma behlaselwa njengoba bebenezitha emkhakheni wamatekisi.
Isolezwe likhulume naye ngebanga aselihambile kulo mdlalo nokuthi kube njani ukuba yingxenye yawo kusuka, uqala kuze kube yimanje. Uzophela ngo-Ephreli.
“Ebengikuthanda kakhulu kulo mdlalo wukuthi kubalingisi, yimina ebengimdala kunawo wonke umuntu futhi nginobudlelwane obuhle nabo bonke. Ukulingisa ngenye yezinto engizithandayo kakhulu njengoba ngesikhathi ngifika eGoli, ngisuka eNewcastle nabazali bami, ngabona ukuthi impilo ngizoyakha ngokungena kulo mkhakha. Ngempela wangiphilisa, buka manje ngikuphi. Ngangena khona ngoba ngingafuni udumo kodwa ngenxa yokuthi ngifuna ukuphila,“ kuchaza uThembi.
Uthe okunye azokukhumbula ngomdlalo ukusebenza nentsha abenganqeni ukuthi uma kukhona engakwenzi kahle uma beqopha, amise yonke into ayisize.
“Mina benginganqeni ukuthi ngimise yonke into, ngisho ukuthi lo mlingisi akenzi ngendlela bese ngimbonisa ukuthi kumele kwenziwe njani. Okunye esake sakuxabanela nophrojusa wukuthi babefuna ngibe nendoda kulo mdlalo. Leyo nto angiyamukelanga futhi ngendlela engangingayithandi ngayo ngakubeka kwacaca ukuthi ngizoshiya kulo mdlalo, uma bengayishintshi indlela abenza ngayo, ngempela bakuyeka lokho. Ukunginika kwabo umyeni kwakuzoshintsha indlela okumele uMkabayi anakekele ngayo umndeni wakhe. Alibale indoda okuyinto eyayingavelanga ngithola le ndawo,“ kuchaza uThembi.
Ngisho empilweni yakhe yangasese uveze ukuthi akanaye umuntu wesilisa aphilisana naye.
“Ngiyathemba ukuthi indawo kaMkabayi ibafundisile abesifazane bakuleli okuningi abazophila ngakho. UMkabayi ngisho engekho umfowabo uMpiyakhe, ubesala anakekele amakhosikazi akhe wonke, abheke ibhizinisi nezingane. Kuyaphileka ngaphandle kwendoda, kumele sikunake lokho singabesifazane,” kuchaza le ngqungqulu yomlingisi.
Uveze ukuthi maduze nje, abantu bazobona zanda izinkinga KwaManzini okuzophela belwa nazo njengomndeni. Kulo mdlalo into athe akayithandanga ngawo, indlela owashintsha ngayo ekuhambeni kwesikhathi, yize kwakuthiwe uzogxila ematekisi.
“Kwakuthiwe uzogxila ematekisini kubonakale izinkinga zakhona kodwa lokho bakwenza kusizini yokuqala bakudedela. Sila sikhona nje yingoba nami bengike ngibatshele ukuthi akesibuyele lapho umdlalo wawuya khona, siyeke lokhu osuyikhona manje senze nocwaningo. Kodwa bebengitshela ukuthi angigxile kulokhu enginikwe khona, okunye ngikuyekele kubona. Ababhali abaqala kulo mdlalo bese bengekho, bahamba, kwafika abanye base beqhamuka nokuhlukile,“ kuchaza yena.
Kulo nyaka uthe usazophumula njengoba kungekho mdlalo asazongena kuwona, okuzothi ngonyaka ozayo bese ethatha imisebenzi ezoqhamuka.